အလုပ်ကနေ ပြန်လာရင်း Vivo City ကနေ Dohby Ghaut ကို ရောက်တယ်။ ခရမ်းရောင်လိုင်းက နေပြီးတော့ အနီရောင်လိုင်းကို လိုင်းပြောင်းတယ်။ အနီရောင်လိုင်းပေါ် တက်လိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ MRT နံရံပေါ်က Reserved Seating ဆိုတဲ့ Logo လေး အပေါ်မှာ အ၀ိုင်းလေး တစ်ဝိုင်းတွေ့တယ်။
ဖြတ်ခနဲ ကြည့်တော့ အ၀ိုင်းလေးထဲက သဏ္ဍာန်လေးက ကိုယ်နဲ့ တော်တော် ရင်းနှီးတဲ့ ပုံပေါက်တယ်။ အနီးကို နည်းနည်း ကပ်ကြည့်လိုက်တယ်။
သေချာသွားတယ်။ တို့ ရွှေနိုင်ငံ မြေပုံ။ လက်ထဲ ပါတဲ့ ကင်မရာနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ တစ်ချက်ရိုက်တယ်။ နည်းနည်း ဝေးတယ်။ အနီးကပ် ထပ်ရိုက်တယ်။ ဒီပုံလေး သုံးပုံ ထွက်လာတယ်။ ရိုက်ခဲ့တာ ဇွန်လ တစ်ရက်နေ့က ဖြစ်ပါတယ်။ အမှတ်တရပါ။
Filed Under : Photo, RECORDS
Singapore Classifieds said...
Sigh... If only I can read Burmese. anyway, nice pics.
ကျွန်တော်လည်း သေချာရိုက်ချိန် မရခဲ့ပါဘူးဗျာ... ဒီပုံလေး ရိုက်တာတောင် အဲဒီ reserved seating မှာ ထိုင်နေတဲ့ လူကြီးမင်းက ဘုရှိုးရှိုးသေးတာဗျ...
အကြီးကို ချဲ့ကြည့်သွားတဲ့ အတွက် အကြီးကြီး မြင်သွားရမယ် ထင်ပါတယ်...
မမဆင်ဆင်လိုပဲ အကြီးချဲ့ကြည့်ရင် သေချာ မြင်ရပါတယ်ဗျ... အပေါ် နှစ်ပုံက တော်တော်လေး ၀ါးပါတယ်။ အောက်ဆုံးပုံကတော့ တော်တော်လေး ကြည်လင် ပြတ်သားပါတယ်။
လာလည် ဖတ်ရှု Comment Put ကြသူများ၊ Comment မ Put ပဲ တိတ်တိတ်လေး ပြန်သွား ကြသူများ အားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးပါ...
အင်း အကြီးချဲ့ကြည့်မှ သေချာတွေ့တော့တယ်။
ကိုယ်တိုင် မကြုံဖူးသေးဘူး O.o
Check out my web site - HTTP://Leoletter.org/
bit evaluation on this. And he in truth purchased me
breakfast because I discovered it for him.. smile. So let
me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for
it and love studying more on this topic. If doable, as you turn into expertise,
details? It is extremely helpful for me. Huge thumb up for this
Here is my homepage - teamgeorgiawrestling.com
My site hooknhound.com
My website: http://springraise.bear-code.com